Impembelelo yeMigangatho eyiNtloko yamaGangatho
Imigangatho eqhelekileyo yesiGqeba iya kuphunyezwa ngokugcwele ukususela ngo-2014-2015. Okwangoku kukho iindawo ezihlanu kuphela ezikhethiweyo ukuba zingayithobeli le migangatho kuquka iAlaska, eMnnesota, eNebraska, eTexas , naseVirginia. Iimpembelelo zeMigangatho eyiNtloko yoLuntu iya kuguqulwa ngokubanzi njengoko oku mhlawumbi kuguqulwa okukhulu kwifilosofi yemfundo kwimbali yase-United States. Uninzi lwabemi luya kuba nefuthe kakhulu ekuphunyezweni kweMigangatho eyiNtloko yeZiko ngefomu enye okanye enye.
Apha, sijonge indlela amaqela ahlukeneyo anokuchaphazeleka ngayo ngamaGangatho aSebenzayo aqhelekileyo.
Kwizemidlalo, kuye kwathiwa umqeqeshi ufumana indumiso enkulu ngokuwina kunye nokugxeka kakhulu ukulahlekelwa. Oku kuya kuba yinyaniso kubaphathi bamagosa kunye neenqununu zezikolo xa kuziwa kwiMigangatho eqhelekileyo yesiGaba. Ngexesha lovavanyo oluphezulu , izigodo azisoze zaphakama kunokuba ziya kuba kunye neCore Common. Uxanduva lwaloo mpumelelo yesikolo okanye ukungaphumeleli kwiMigangatho eyiNtloko yeMigangatho ekugqibeleni liwa kubukhokeli bayo.
Kubalulekile ukuba abalawuli bazi into abajongene nayo xa kufikelele kwiMigangatho eyiNtloko yesiGaba. Kufuneka babe necebo lokuphumelela kwindawo edibanisa ukubonelela ngamathuba ophuhliso oluthile ootitshala, ukulungelelaniswa ngokweenkcubeko kunye nekharityhulam, kwaye kufuneka bafumane iindlela zokufumana uluntu lufumane ukubaluleka kwesiGaba esiPhakathi.
Abo balawuli abangayilungiseleli iMigangatho engundoqo yesiGqeba-mali bangaphelela ukulahlekelwa ngumsebenzi xa abafundi babo bengenzi ngokwaneleyo.
Ootitshala (iincwadi ezingundoqo )
Mhlawumbi akukho qela liza kuziva uxinzelelo lweMigangatho eyiNtloko yamaGangatho angaphezu kootitshala. Ootitshala abaninzi baya kufuneka batshintshe indlela yabo ngokupheleleyo eklasini ukwenzela ukuba abafundi babo baphumelele kwiimvavanyo eziqhelekileyo zoMgangatho weeNqobo.
Musa ukuphambuka ukuba le mi gangatho kunye novavanyo oluhamba nabo lujoliswe ukuba lube nzima. Ootitshala baya kufuneka benze izifundo ezibandakanya izakhono eziphezulu zokucinga nokubhala izinto ukuze kulungiselelwe abafundi kwiMigangatho eyiNtloko yoLuntu. Le ndlela inzima ukufundisa imihla ngemihla kuba abafundi, ngokukodwa kwesi sizukulwana, banqabile kwezo zinto ezimbini.
Kuya kuba noxinzelelo olungaphezulu kunokuba lubekwe ootitshala abafundi babo abaphumelelanga ngokwaneleyo kwiimvavanyo. Oku kunokukhokelela ekubeni ootitshala abaninzi baxoshwa. Uxinzelelo olunzulu kunye nokuhlolisiswa ukuba ootitshala baya kuba ngaphantsi baya kudala uxinzelelo kunye nokutshiswa kotitshala okungakhokelela kubaninzi abaninzi, ootitshala abaselula abasuka kwintsimi. Kukho nethuba lokuba ootitshala abanamava amaninzi baya kukhetha ukuthatha umhlalaphantsi kunokuba benze utshintsho olufunekayo.
Ootitshala abanako ukulinda de kunyaka wesikolo se- 2014-2015 ukuba baqale ukutshintsha indlela yabo. Bafuna ukubeka izigaba eziqhelekileyo eziqhelekileyo kwizifundo zabo. Oku akuyi kubanceda nje nje ngootitshala kodwa kuya kunceda abafundi babo. Ootitshala kufuneka bahambe kuzo zonke uphuhliso lwezakhono abanokuzenza kunye nokusebenzisana nabanye ootitshala malunga neCandelo eliQhelileyo.
Ukuba nolwazi oluqinileyo malunga neMigangatho engundoqo yesiGaba kunye nendlela yokufundisa ngayo imfuneko ukuba utitshala uya kuphumelela.
Ootitshala (abaNcinci beZifundo)
Ootitshala abazodwa kwimimandla enjengemfundo yempilo , umculo, kunye nobugcisa baya kuthinteka kwiMigangatho yoLuntu oyiNtloko. Ingqiqo kukuba le mimandla iyasebenza. Abaninzi bakholelwa ukuba ziinkqubo ezongezelelweyo eziya kuthi izikolo zizinikeze nje ukuba imali ifumaneke kunye / okanye ayithathi ixesha elide kwiindawo eziphambili zezifundo. Njengoko uxinzelelo luqhubela ukuphucula amanqaku okuvavanywa kwiiNkcazo eziPhezulu zoLuntu, izikolo ezininzi zinokukhetha ukuphelisa le nkqubo ukwenzela ukuvumela ixesha elide lokufundisa okanye ixesha lokungena kwiindawo eziphambili.
ImiGangatho eyiNtloko yeMigangatho ngokwayo iveza amathuba ootitshala beengezizo ezizimeleyo ukudibanisa imimiselo yemigangatho eqhelekileyo yesiGaba kwizifundo zabo zemihla ngemihla.
Ootitshala kule mimandla banokuthi bajonge ukuhlala. Baya kufuneka babe nobuchule ekubandakanya iinkalo zeSiqhelo esiqhelekileyo kwizifundo zabo zemihla ngemihla ngenkqubela kwiingcambu zezemfundo zemvelo, ubugcisa, umculo, njl njl. Ootitshala banokufumanisa ukuba kuyimfuneko ukuzivuselela ukuze baqinisekise izikolo ezikwilizwe lonke.
Iingcali zokufunda kunye neengcali zongenelelo ziya kuba zibonakala zibalaseleyo njengoko izikolo ziya kufuna ukufumana iindlela zokuvala izikhefu ekufundeni nasezibalo ukuba abafundi abanomdla banakho. Uphando luye lwabonisa ukuba umyalelo ngomntu omnye okanye ngeqela elincinci unempembelelo enkulu kwixesha elikhawulezayo kunomyalelo weqela lonke . Kubafundi abanomzabalazo wokufunda kunye / okanye izibalo, oyingcali angasebenzisa imimangaliso ngokuzifumana kwizinga. NgemiGangatho eQhe leNqobo, umfundi weBakala wesine ofunda kwi nqanaba lesibini liza kuba nethuba lokuphumelela. Ngeentsika eziphakamileyo njengoko ziya kuba, izikolo ziya kuba zihlakaniphe ukuqesha iingcali ezininzi ukuncedisa abo bafundi abaqeshwayo abancedayo xa banokufumana uncedo olungakumbi.
Nangona iiMigangatho eziQala eziPhambili zibeka umngeni omkhulu kumlawuli kunye nootitshala, ziya kuba ngabafundi abangenakwazi ukuzuza kakhulu kubo. Imigangatho eqhelekileyo yesiGaba iya kulungiswa kangcono abafundi kubomi emva kokufunda esikolweni esiphakeme. Izakhono zokucinga zamanqanaba aphezulu, izakhono zokubhala, kunye nezinye izakhono eziqhotyoshelweyo kwiCore Common, ziya kuba luncedo kubo bonke abafundi.
Oku akuthethi ukuba abafundi abayi kulwa nobunzima kunye noshintsho oluhambelana neMigangatho Eqhelekileyo YemiGangatho.
Abo bafuna iziphumo ezikhawulezileyo azinakwenzeka. Abafundi abangena esikolweni esiphakathi okanye ngaphezulu kwe-2014-2015 baya kuba nexesha elinzima ukulungelelanisa kwiNkcitho eQheleleyo kunezo zangena kwi-Pre-Kindergarten ne-Kindergarten. Kuza kuthatha umjikelo opheleleyo lwabafundi (intsingiselo engama-12-13 iminyaka) ngaphambi kokuba sibone ingqinisiso yinyani yeMigangatho eqhelekileyo yabafundi kubafundi.
Abafundi kufuneka baqonde ukuba isikolo siya kuba nzima kakhulu ngenxa yeziGangatho eziPhambili zoLuntu. Kuya kufuna ixesha elide ngaphandle kwesikolo kunye nendlela ejoliswe kuyo esikolweni. Kubafundi abadala, oku kuya kuba yinkqubo enzima , kodwa kuya kuba luncedo. Ekuhambeni kwexesha, ukuzinikezelwa kwabafundi kuya kuhlawula.
Inqanaba lokubandakanyeka kwabazali kuya kufuneka likhulise ukwenzela ukuba abafundi baphumelele kwiMigangatho eyiNtloko yesiGaba. Abazali abaxabisa imfundo baya kuthanda iMigangatho engundoqo yesiGaba kuba abantwana babo baya kutshatyalaliswa njengangaphambili. Nangona kunjalo, abo bazali abangakwazi ukubandakanyeka kwimfundo yabantwana babo baya kubona ukuba abantwana babo bayalwela. Kuya kuthatha iqela elipheleleyo leqela kuqala kubazali ukuba abafundi baphumelele. Ukufunda kubantwana bakho bonke ubusuku ukususela ekuzaleni kwabo baqala amanyathelo okubandakanyeka kwimfundo yabantwana bakho. Indlela ephazamisayo yokukhulisa abantwana kukuba xa umntwana ekhula, izinga lokuthatha inxaxheba liyehla. Lo mkhuba udinga ukutshintshwa. Abazali kufuneka babe njengobandakanyeka kwimfundo yabantwana abaneminyaka eyi-18 njengoko beneminyaka emi-5.
Abazali baya kufuneka baqonde ukuba yiyiphi iMigangatho eyiNtloko yeMigangatho kunye nendlela abachaphazela ngayo ikamva lomntwana. Baya kufuna ukuthetha ngokuthe ngempumelelo kunye nootitshala babantwana babo. Baya kufuna ukuba bahlale phezulu komntwana babo ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wesikolo uzaliswe, ubabone ngomsebenzi owongezelelweyo, kwaye ugxininise ukubaluleka kwemfundo. Abazali ekugqibeleni banesichukumiso esiphezulu kwinkqubo yomntwana esikolweni kwaye akukho nanye ixesha elinamandla kunokuba liya kuba kwixesha eliqhelekileyo eliqhelekileyo eliqhelekileyo.
Ngethuba lokuqala kwimbali ye-United States, iyakwazi ukuthelekisa amanqaku omvavanyo ngokuchanekileyo ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye. Kwindlela yethu yangoku, kunye namazwe aneemigangatho nemigangatho eyahlukileyo, umfundi unokukwazi ukufunda kwimeko enye kwaye enganelisekanga kwelinye. Imigangatho eqhelekileyo yoLuntu iya kubangela ukhuphiswano phakathi kwamazwe.
Olu khu phiswano lunokuba nolwaphulo lwezopolitiko. I-Senators kunye nabameli bafuna ukuba amazwe abo aphumelele kwizifundo. Oku kunokunceda izikolo kwezinye iindawo, kodwa kunokuzilimaza kwabanye. Impembelelo yezopolitiko kwiMigangatho eyiNtloko yoLuntu iya kuba nophuhliso olumnandi ukulandela njengoko amanqaku okuhlola aqala ukupapashwa ngo-2015.
Imfundo ePhakamileyo kufuneka ichatshazelwe kakuhle ngamaGangatho aQala aMgangatho njengoko abafundi kufuneka balungele kangcono kwikharityhulam yekholeji. Ingxenye yombutho oqhutywe emva kweCandelo eliQhelileyo kukuba abafundi abaninzi beza kwiikholeji bafuna ukulungiswa ngokukodwa kwimimandla yokufunda nokubala. Lo mkhangeli waba nekholi yokunyusa ukwanda kwimfundo karhulumente. Njengoko abafundi bafundiswa basebenzisa iMigangatho eyiNtloko yesiGaba, le mfuneko yokulungiswa kufuneka ihle kakhulu kwaye abafundi abaninzi kufuneka bahlale bekulungele ikholeji xa bephuma esikolweni esiphakeme.
Imfundo ephakamileyo iya kuba nefuthe ngqo kwiindawo zokulungiselela uotitshala. Ootitshala bexesha elizayo kufuneka balungele ngokwaneleyo kunye nezixhobo eziyimfuneko ukufundisa iMigangatho eyiNtloko yeMigangatho. Oku kuya kulahla uxanduva lweekholeji zootitshala. Iikholeji ezingenzi utshintsho kwindlela abalungiselela ngayo ootitshala bexesha elizayo zenza uncedo kulabo titshala kunye nabafundi abaza kubakhonza.
Amalungu oluntu kuquka nabathengisi, amashishini, kunye nabemi bokuhlawula irhafu baya kuthinteka kwiMigangatho eQhe leNqobo. Abantwana lixesha lethu elizayo, kwaye ke wonke umntu kufuneka atyalwe kwixesha elizayo. Iinjongo eziphambili zeMigangatho eyiNtloko yoLuntu ukulungiselela abafundi ngokufanelekileyo kwimfundo ephakamileyo kunye nokubenza bakwazi ukuncintisana noqoqosho lwehlabathi. Uluntu olutyalomali ngokupheleleyo kwimfundo luya kubuyisa umvuzo. Utyalo-mali lunokuvela ngexesha lokunikela, imali, okanye iinkonzo, kodwa uluntu oluxabisa nokuxhasa imfundo luya kukhula kwezoqoqosho.
I-Antecedent - Injongo ecacileyo yokuhlalutya iingxaki ezinzima
Ubaluleka bokugcina ubuGcisa kwiZikolo
Injongo yokwakha uVavanyo lwePortfolio
Nkqubo wezoNxibelelwano lweSikolo
Ukuvavanya Ulwaphulo Lwezemfundo Ezizodwa
Indlela yokuba ngumfundisi oMangalisayo kunye noTitshala ophumeleleyo
Iinkonzo kunye neNyala yokuTitshala
I-10 ephezulu kakhulu kunazo zonke amagama aseNtaliyane amaNyana aBantwana
Ukusebenzisa iVerb yaseVestern Quedar
Ukuqonda nokusebenzisa iiFinfinitives
I-Cassandra's Rant - I-Comedic Female Monologue
Ishicilelo 2: Injongo yoMbhali
Iinkqubo zoPafo lweoli: I-Fat Over Lean
I-Golf Cart Etiquette kunye neMithetho yeNdlela
Udlala njani umdlalo weGeorge Defender
Yintoni 'yeBhanana yeBhola' eGoli?
Isikhokelo soMfundisi oPhezulu kuLuleko
I-Parinirvana: Indlela iBuddha ye-Historical yangena ngayo iNirvana
Ukusebenzisa umxholo wokuFunda nokuBhala kwiSigaba se-ESL
Ulawulo kunye neqela lovavanyo: Bahluke njani?
Iimpawu eziyingqayizivele kunye neenyaniso malunga ne-Zodiac Sign Virgo
Ukunyuswa kwexesha kunye nexesha lokuhamba
Iingcamango zesiLwimi zesiJamani - uLassen (Ukuvumela, Ukushiya, nokuVumela)
Yintoni uMthetho WezeMbaleki Wase-United States we-1980?
Iibhodi zeBluelet for Teaching